Lego Marvel 76165 Iron Man သံခမောက်ကိုလွှတ်ပေးသည့်နေ့ရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
05 / 06 / 2020 05 / 06 / 2020 ဂရေဟမ် 1832 Views စာ0မှတ်ချက် 18 +, 2020, AIM အေးဂျင့်ဆန့်ကျင် 76164 Iron Man Hulkbuster, 76165 သံက Man သံခမောက်လုံး, Avengers, Lego မှ marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ
အဆိုပါ Lego Group မှဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် Lego Marvel Avengers 76165 သံက Man သံခမောက်လုံး နှင့် AIM အေးဂျင့်ဆန့်ကျင် 76164 Iron Man Hulkbuster.
သုံးသစ် Lego Marvel မကြာမီကစတင်ခဲ့သည် 76151 Venomosaurus ကင်းထိုး, 76152 Loki ၏သေစားသေစေသောအမျက်ဒေါသ နှင့် ၇၆၁၅၃ Avengers Helicarrier။ ရှုပ်ထွေး 76165 သံက Man သံခမောက်လုံး နှင့် AIM အေးဂျင့်ဆန့်ကျင် 76164 Iron Man Hulkbusterတစ်ချိန်တည်းတွင်ကြေငြာခဲ့သည့်ထိုနေ့တွင်ပင်လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
အခုတော့ LEGO.com ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ် 76165 သံက Man သံခမောက်လုံး နှင့် AIM အေးဂျင့်ဆန့်ကျင် 76164 Iron Man Hulkbuster ကိုသြဂုတ်လ ၁ ရက်တွင်ယူကေ၌၎င်း၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်တွင်အမေရိကန်၌စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
76165 သံက Man သံခမောက်လုံး ပထမ ဦး ဆုံးနောက်ကျောဇန်နဝါရီလအတွက်လမ်းကြေညာခဲ့သည်နှင့်အလားတူပုံစံကိုအောက်ပါအတိုင်း Lego Star Wars တည်ဆောက်နိုင်သောပုံစံခမောက်များ၊ အရာကိုလည်းဒီနှစ်စတင်ခဲ့သည်.
Iron Man သံခမောက်၏တည်ဆောက်ပုံနှင့်ပြသမှုပုံစံသည်ရုပ်ရှင်ရုံ၏လူသိအများဆုံးဇာတ်ကောင်များထဲမှအထင်ကရပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဦး ထုပ်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည့်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ လူတိုင်းမြင်နိုင်မည့်နေရာကိုသေချာစွာထားပါ။
AIM အေးဂျင့်ဆန့်ကျင် 76164 Iron Man Hulkbuster
← အဆိုပါ LEGO Group အစုံရောင်းချမှုမှဖယ်ရှားပစ်ကြပြီမဟုတ်အတည်ပြု
LEGO Technic 42115 Lamborghini Sián FKP 37 တွင် Aurelien Rouffiange နှင့်အတူ →